Xog-warran: Maxaa Jubaland ku qasbay fadeexaddii ka raacay safarkii Uhuru ee Dhoobleey? - Caasimada Online
Home Warar Xog-warran: Maxaa Jubaland ku qasbay fadeexaddii ka raacay safarkii Uhuru ee Dhoobleey?
Xog-warran: Maxaa Jubaland ku qasbay fadeexaddii ka raacay safarkii Uhuru ee Dhoobleey?
Kismaayo (Caasimada Online) – Maamulka Goboleedka Jubblanad ayaa la kulmay fadeexad weyn markii ay isku dayeen inay inkiraan safarkii uu Madaxweynaha Dalka Kenya Uhuru Kenyatta ku tagay Magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose.
Dhoobleey waxaa ka arrimiyo maamulka Jubbland ee hoostago dowladda Soomaaliya, wuxuuna ka dhawaajiyey inuusan madaxweynaha Kenya Uhura Kenyatta imaan Magaalada Dhoobleey iyo meel u dhaw.
Haddaba waxaa kadib soo baxay war weyn oo ku noqday caqabad iyo fadeexad markii afhayeenka madaxweynaha KenyaManoah Esipisu uu saxaafadda kula hadlay Nairobi isagoo ka dhawaajiyey inuu Kenyatta booqasho lama filaan ah ku tagay Magaalada Dhoobley ee Soomaaliya.
Markii uu hadalkaas soo baxay ayaa waxaa Soomaaliya qabsatay is waydiinta su,aalo ku saabsan sababta keentay In Maamulka Jubbaland uu isku dayo inkiraadda intaas la eg ee sababtay inay inkiraan safar dhan oo uu madaxweyne ku imaaday Soomaaliya.
Dadka falanqeeyo siyaasadda ayaa aaminsan in Safarka Uhuru uu ku yimid Dhoobley inuu ahaa mid aan sharciga waafaqsaneyn , dibna ay kala xumaastay waxayna Kenya iyo Jubblanad isku dayeen inay inkiraan Arrintaas.
Maamulka Jubbland Axmed Madoobe waxaa u fududeeyey inuu Kismaayo qabsado ka hor inta aan maamulkaaas lagu dhawaaqin dowladda Kenya, waxaana meelaha ugu muhiimsan maamulkiisa joogo ciidamo ka socdo Dowladda Kenya oo ka tirsan Midowga Africa waxaana arrintaas inkiraada ah loo sababeenayaa xiriirka fiican ee ka dhaxeeyo Jubblanad iyo Kenya.
Ceebta ku dhacday Jubbaland ayaa timaaday markii Uhura uu ka dhawaajiyey inuu halkaas safar ku tagay iyadoo markii hore ay ballanta aheyd in la qariyo, balse midaas way qarsoomi weysay markii sawiro iyo muuqaalo ku saabsan safarkaas lagu baahiyey wargeysyada ugu caansan adduunka.
Ilaa hadda lama xaqiijin sababta rasmiga ah ee uu Uhura u tagay halkaas balse waxaa la rumeysan yahay inuu booqasho ugu tagayey ciidamo ka tirsan dowladiisa oo halkaas ku sugan sidoo kalana wuxuu booqday dhaawacyo ka tirsan ciidamada Kenya oo yaal Isbitaal halkaas ku yaalay.
Safarka uu Uhura ku tagay Dhoobley ee fasax la’aanta ah waxaaba kasii daran Maamulka Jubbland oo isku dayayo inuu Soomaaliya uga hiiliyo Kenya taasoo ku noqotay ceeb iyo fadeexad wey, waxaana markii Farmaajo la doortay loo heystay in maamulka kaliya ee sida daacadda ah u taageersan inuu yahay Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbland Axmed Madoobe ayaa looga fadhiyaa inuu jawaab cad ka bixiyo haddii uu wax ka ogaa safarka Uhura iyo sababta keentay in maamulkiisa uu inkiro safarkaas shacidarada ah ee xiisadda ka dhex dhaliyey dowladaha Kenya iyo Soomaaliya.
Maamulka Jubbaland ayaa noqday maamulkii ugu horreeyey ee ka tirsan Maamul Goboleedyada dalka oo si sharci darro ah madaxweyne ku keenay deegaanada uu ka arrimiyo midaasna waxay dhaawac weyn ku tahay sharafta iyo karaamada maamulkaas.